पुन: ब्रान्डिङ: उदाहरण | ईकमर्स समाचार
जब एक ब्रान्डले केहि समय लिन्छ, वा यसको लक्षित दर्शकहरूलाई छुटेको छ, यसले आफ्ना उत्पादनहरू प्याकेज गर्ने तरिका वा कसरी सेवाहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंले रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। यसका उदाहरण धेरै छन् । सबै भन्दा प्रसिद्ध ब्रान्डहरु को केहि पीडा भएको छ, केहि सफलता संग, र केहि आफ्नो असफलता संग।
त्यसैले, यस अवसरमा, हामी चाहन्छौं तपाईंलाई पुन: ब्रान्डिङका केही उदाहरणहरूको बारेमा बताउनुहोस् त्यसोभए तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ सुधार गर्नाले सफलताको नेतृत्व गर्न सक्छ। तपाईं यस बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
1 रिब्रान्डिङ भनेको के हो
1.1 ब्रान्डिङ, रिब्रान्डिङ र रिस्टाइलिङ
2 कहिले रिब्रान्डिङ गरिन्छ
3 रिब्रान्डिङ: वास्तविक र सफल उदाहरणहरू
रिब्रान्डिङ भनेको के हो
तपाइँलाई उदाहरण दिनु अघि, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँले त्यो शब्दको अर्थ के हो भनेर जान्नुहुन्छ। ब्रान्डिङ भनेको ब्रान्डको पहिचान हो: तपाईंको लोगो, सन्देश, उत्पादनहरूको प्याकेजिङ्ग ... छोटकरीमा, यो सबै चीज हो जसले ब्रान्ड वा कम्पनीलाई व्यक्तित्व दिन्छ।
यद्यपि, समय बित्दै जाँदा यो ब्रान्ड पुरानो भएको छवि बनाउन सक्छ। ६० को दशकमा जन्मेको र २०२२ मा नयाँ कुरा ल्याउने इच्छा जस्तो। फेसनहरू फर्किए पनि ब्रान्ड आफैं पुरानो देखिनेछ।
त्यसो भए ब्रान्ड पहिचानको कुल वा आंशिक परिमार्जन समावेश गर्ने कुनै पनि मार्केटिङ रणनीतिलाई रिब्रान्डिङ भनिन्छ।
हामी तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छौं। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले 2000 मा एउटा कम्पनी सिर्जना गर्नुभयो र यसको लोगो पेसेटा सिक्का हो। तपाईलाई थाहा छ, त्यो समयमा यूरो पहिले नै परिसंचरण सुरु भएको थियो। सोच्नुहोस् कि तपाईंले यसलाई परिवर्तन गर्नुभएको छैन। 2022 मा pesetas अब अवस्थित छैन र तिनीहरूलाई सम्झने मात्र 40 वर्ष पुरानो (सायद 30 वर्ष पुरानो)। यद्यपि, तपाईंको लक्षित दर्शकहरू २० देखि ३० छन्। के तपाईं त्यो लोगोको साथ सफल हुनुहुनेछ? सबैभन्दा सम्भव छ कि छैन।
त्यसकारण, लोगो परिवर्तन गर्नु भनेको पुन: ब्रान्डिङ रणनीतिहरू मध्ये एक हो।
ब्रान्डिङ, रिब्रान्डिङ र रिस्टाइलिङ
El ब्रान्डिङ र हामीले पहिले नै विस्तृत पुन: ब्रान्डिङ गरिसकेका छौं र तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि तिनीहरू फरक सर्तहरू हुन् यद्यपि तिनीहरू एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। र यो हो कि ब्रान्डिङ बिना कुनै रिब्रान्डिङ हुनेछैन।
संक्षेपमा, हामी यो भन्न सक्छौं ब्रान्डिङ भनेको ब्रान्डको पहिचान हो र रिब्रान्डिङ भनेको त्यो ब्रान्ड पहिचानको परिमार्जन हो।
तर पुनर्स्थापनाको बारेमा के हो? के यो रिब्रान्डिङ जस्तै हो?
यदि तपाईंले पहिले रिस्टाइलिङ शब्द कहिल्यै सुन्नुभएको छैन भने, तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ कि यसले ब्रान्ड पुन: डिजाइनलाई जनाउँछ। तर विशेष गरी छविमा। अर्को शब्दमा, लोगोमा परिवर्तन, अक्षरहरूको प्रकारमा परिवर्तन, तिनीहरू व्यवस्थित गर्ने तरिकामा ... तर रङ वा शैली परिवर्तन नगरी।
हामी भन्न सक्छौं कि रिब्रान्डिङ मुख्यतया दृश्य पहिचानलाई पुन: परिभाषित गर्न र कर्पोरेट पहिचानलाई अनुकूलन गर्नमा केन्द्रित छ। अर्को शब्दमा, रिस्टाइलिङ रिब्रान्डिङको एक भाग हो।
कहिले रिब्रान्डिङ गरिन्छ
पुन: ब्रान्डिङलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन, न त यो हानिकारक हुन सक्छ जुन तपाईं चाहनुहुन्छ जब गर्न सकिन्छ।
उदाहरण को लागी, सोच्नुहोस् कि तपाईसँग एउटा ब्रान्ड छ र तपाई यसलाई थाहा दिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर6महिनामा तपाईले लोगो परिवर्तन गर्नुहुन्छ किनभने तपाईलाई यो मनपर्दैन। अनि फेरि। ती सबै परिवर्तनहरूले ग्राहकहरू र प्रयोगकर्ताहरूलाई पागल बनाउँछ किनभने तिनीहरूले तपाईंलाई चिन्न सक्दैनन्। यदि तिनीहरूले तपाईंको व्यवसायसँग एक विशिष्ट छवि सम्बन्धित छन् र तपाईंले यसलाई परिवर्तन गर्नुभयो भने, दृश्यात्मक रूपमा तिनीहरूले तपाईंलाई चिन्न सक्ने छैनन्, र यसले पुन: प्रवर्द्धन र लगानी गर्नु पर्ने संकेत गर्दछ ताकि तपाईं आफ्ना दर्शकहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
यसको लागि, पुन: ब्रान्डिङ मात्र सिफारिस गरिएको छ:
जब कम्पनीहरू पहिले नै भित्र छन् परिपक्वता चरण, त्यो हो, जब तिनीहरू पहिले नै राम्ररी परिचित छन् र वृद्धिमा जारी राख्न परिवर्तन आवश्यक छ।
कहिले ग्राहकहरु संग ब्रान्ड पहिचान को कुनै सम्बन्ध छैन। राम्रो किनभने प्रवृत्तिहरू परिवर्तन भएका छन्, किनभने यो पुरानो भएको छ, आदि। ती अवस्थामा यो पनि एक पुन: ब्रान्डिङ रणनीति स्थापना गर्न सल्लाह दिइन्छ।
ध्यान राख्नुहोस् कि यो केवल परिवर्तन र अहिले होइन। सबै भन्दा राम्रो परिवर्तन के हो, र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छान्न सक्षम हुनको लागि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ, ताकि ग्राहकहरूले हामीलाई चिन्ने र त्यसको लागि सक्रिय भएको कम्पनीसँग नयाँ छवि र ब्रान्ड पहिचानलाई सम्बन्धित गरून्। धेरै वर्ष।
रिब्रान्डिङ: वास्तविक र सफल उदाहरणहरू
हामीले तपाईंलाई पुन: ब्रान्डिङको बारेमा बताउन सक्ने सबै शब्दहरू भन्दा एउटा उदाहरण बढी मूल्यवान छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तल हामी सफल उदाहरणहरू र वास्तविक कम्पनीहरू हेर्न जाँदैछौं। पक्कै पनि एक भन्दा बढिले तपाईंलाई आवाज दिन्छ।
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, यो ब्रान्डलाई धेरै मनपर्ने कुरा होइन, तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ, जब यो जन्मिएको थियो, यसमा पहिलो लोगो थियो जुन स्याउको रूखमुनि न्यूटनको दृष्टान्त थियो, माथि एउटा स्याउ थियो। उसको टाउकोको।
स्पष्ट रूपमा लोगो मन परेन, र त्यही वर्ष (हामी 1976 को बारेमा कुरा गर्दैछौं) तिनीहरूले इन्द्रेणी को रंग संग एक स्याउ को सिल्हूट मा परिवर्तन गरे। थप सफल र थप उल्लेखनीय। पूर्ण सफलता।
वास्तवमा, 1976 पछि यसको लोगो रङको सन्दर्भमा मात्र परिवर्तन भएको छ, तर मूल स्याउ बाँकी छ।
तपाईंले धेरै महसुस नगर्नु भएको हुन सक्छ, र यो पुन: ब्रान्डिङ भन्दा रिस्टाइलिङको उदाहरण हो। तर त्यहाँ छ।
यदि तपाईंले पहिलो Youtube लोगो देख्नुभयो भने, तपाईंले त्यो देख्नुहुनेछ शब्दको दोस्रो भाग, Tube, रातो बक्समा थियो, एउटा च्यानललाई जनाउँदै। तर जब उनले त्यो बाकस परिवर्तन गरे, उनले आफैलाई त्यहाँबाट हटाए र शब्दलाई प्राथमिकता दिए, यसमा नाटक राखे।
सफलता? सत्य यो हो कि यदि। यो स्पष्ट छ, के भइरहेको छ भनेर अझ स्पष्ट र सरल छ।
2010 मा जन्मिए पछि परिवर्तन भएको अर्को ब्रान्ड यो हो। अब तपाइँ यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ तर 2010 मा यसमा दुईवटा लोगो परिवर्तनहरू थिए, र अर्को 2011 मा। पहिले यो पुरानो जमानाको क्यामेरा थियो (र त्यो समयमा पहिले नै आधुनिकहरू थिए)। पछि तिनीहरूले यसलाई अलिकति सरल लोगोमा परिवर्तन गरे, र अर्को वर्ष तिनीहरूले यसलाई थप छाला-जस्तो लुक दिए, छविलाई नजिक ल्याउँदै र फरक फोकस सिर्जना गर्दै।
यदि हामीले अहिलेको लोगोलाई 2010 को एकसँग तुलना गर्छौं भने फोकस र फ्ल्यासभन्दा बाहिर धेरै तुलनाहरू छैनन्।
हामीले तपाईंलाई उद्धृत गर्न सक्ने अरू धेरै छन्: McDonald's, Google, Nescafé, Ikea, Disney ... के तपाईंलाई ती पुन: ब्रान्डिङ र उदाहरणहरू बारे थाहा छ? हामीलाई टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस् र तपाई के सोच्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस्, यदि यो सही थियो वा होइन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ईकॉमर्स समाचार » मार्केटिङ » अनलाइन मार्केटिंग » पुन: ब्रान्डिङ: उदाहरणहरू